တွဲဖက်ရာထူး Casting | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » တွဲဘက်ရာထူး Casting
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: Casting တွဲဘက်ရာထူး
4-6 ရက်သတ္တပတ်, 10 /3စတင်သည်
အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားအတွက်အထူးပြုနယူးယောက်အခြေစိုက်သတ္တုများပုံသွန်းရုံးတစ်ကာစ်တွဲဘက်ရှာကြံနေပါတယ်။ အဆိုပါ Casting တွဲဘက်မျိုးစုံပြပွဲများအတွက်သတ္တုများပုံသွန်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍယူဆပါလိမ့်မယ်, နှင့်အနေအထား 4-6 ပတ်ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်မှန်သတ္တုများပုံသွန်းအနည်းဆုံး2နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်သငျ့သညျ။ အတှေ့အကွုံကိုအောက်ပါနယ်ပယ်များတွင်အထူးသဖြင့်အရေးပါသည်:
အင်တာဗျူးအလားအလာသွန်း (ကင်မရာ, အလင်းအိမ်နဲ့ audio သုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်မြင့်)
•ကြှနျုပျတို့တှငျအလုပျလုပျနေသောမတူကွဲပြားပြပွဲများအတွက် Creative အရင်းအမြစ်အရည်အချင်းပြည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (ဒီအအေးခေါ်ဆိုမှုအဖြစ်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုများနှင့်ကွန်ယက်တို့ပါဝင်သည်)
•အချိန်မီရှာဖွေတာတွေနဲ့ Assist နှင့်လာမည့်သတ္တုများပုံသွန်းဖြစ်ရပ်များ၏အလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအကြောင်းကြားရန်ထိရောက်ကြော်ငြာအခွင့်အလမ်းများကိုကုန်ကျ
•မျက်နှာပြင် applications များမှသမ္မာသတိကိုသုံးပါနှင့်ပထမဦးဆုံးအလှည့်လည်ဖုန်းသို့မဟုတ် Skype ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းလုပ်ဆောင်သွားရန်
•အလားအလာသွန်းနှင့် ပတ်သက်. အမြင်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ ချ. ဒါရိုက်တာနှင့်ထုတ်လုပ်သူများပေး
•သတ္တုများပုံသွန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ပေါင်း
• Microsoft Office Suite အတွက်ကျွမ်းကျင်မှု
• Strong အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှု
•အသေးစိတ် oriented နှင့်ကောင်းစွာထင်နှင့်မဟာဗျူဟာအဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းနှင့်အတူဖွဲ့စည်း
• High-တိုးတက်မှုနှုန်းမြန်ဆန်-ပွေးညီ, နောက်ဆုံးနေ့-မောင်းနှင်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီပတ်ဝန်းကျင်တွင်အတွေ့အကြုံ
•စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုကူးပြောင်းသူတစ်စမတ် "ကိုသွား getter"
• Mac ကွန်ပျူတာများ အသုံးပြု. တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်
•လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ (Facebook, Twitter စသည်တို့ကို) နဲ့အဆင်ပြေဖြစ်ရမည်
•ဗီဒီယို, ဓါတ်ပုံ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကိရိယာများကျွမ်းကျင်မှု, အဆောက်အဦက်ဘ်ဆိုက်များ, Adobe Acrobat အတွက်ကျွမ်းကျင်မှု, နောက်ဆုံးဖြတ်အပိုဆု
Apply to: အဖုံးစာတစ်စောင်တင်ပြပေးပါ။
ဆိုးကျိုးများအပြီး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် တွဲဘက်ရာထူး Casting photoshop ထုတ်လုပ်မှု တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2016-09-30